Sida looga beddelo Wi-Fi Xarunta Xakamaynta oo leh iOS 13 | Wararka IPhone
Sida looga beddelo Wi-Fi Xarunta Xakamaynta oo leh iOS 13
macruufka 13 hadda waa la heli karaa sida beta bulshada taas oo isticmaale kasta uu heli karo. Si kastaba ha noqotee, wali ma ahan mid xasilloon oo khaladaad leh, markaa haddii aad rabto in qalabkaagu si habsami leh u socdo waa inaad ku sii jirtaa macruufka 12. Riwaayadaha cusub ee macruufka 13 way badan yihiin, gaar ahaan marka la eego iPadOS oo shaqooyinkooda waaweyn ay ku jiraan moodooyinka cusub ee kiniinka Apple.
Mid ka mid ah astaamo cusub oo muddo dheer la sugayay IOS 13 waa awooda lagu u wareeji shabakadda Wi-Fi ama qalabka Bluetooth-ka ee toos ugu xiran laga bilaabo Xarunta Xakamaynta, adigoon galinayn Qalabka Qalabkayaga. Boodka ka dib waxaan kuu sheegi doonaa sida.
U wareeji Wi-Fi si fudud macruufka 13
Xawaaruhu waa muhiim nidaamka qalliinka. Haddii qalab uusan sifiican uhadal, uma ciyaaro animations-ka firfircooni ahaan waxayna qaadataa waqti dheer in la sameeyo howlaha, dadka isticmaala way ka caajisi doonaan iyo laba arrimood ayaa dhici kara: inay beddelaan badeecada ama inay dib ugu noqdaan qaabkii hore (haddii ay suurtagal tahay). IOS 13 ujeedadeedu waa inay noqotaa nooc firfircoon, dhakhso badan oo dheecaan leh. Waqtigana waxay umuuqataa inay sidaas tahay.
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee iOS 13 waa suurtagalnimada helitaanka menus adigoo riixaya in muddo ah labadaba codsiyada iyo dibaddaba. Tani waa kiiska hawsha aan maanta ka hadlayno: beddel shabakadda Wi-Fi ama qalabka ku xiran Bluetooth adiga oo aan marin barnaamijka macruufka, oo dhan si toos ah Xarunta Xakamaynta, waxaa loogu talagalay:
Waxa ugu horreeya, waa lagama maarmaan in lagu rakibo qalabkeena 13. Sidaas darteed haddii aad tahay horumariye, waad ku rakibi kartaa iyada oo loo marayo astaantaada horumariyaha. Haddii kale, waad iska diiwaan gelin kartaa betasyada dadweynaha ee horeyba looga heli jiray xidhiidhkan.
Haddii aad horey u haysatid macruufka 13 qalabkaaga, kaliya gal Xarunta Xakamaynta. Ka soo durkay dhinaca midig kore labada iPhone iyo iPad.
Ku cadaadi dhowr ilbiriqsi astaanta Wi-Fi o Bluetooth isla markiiba liistada ayaa ka soo muuqan doonta shabakadaha Wi-Fi ama aaladaha Bluetooth-ka ee la heli karo si loogu lammaaneeyo. Haddii ay dhacdo inaad xiriir la yeelan weydo shabakadaas ama aaladdaas, erayga sirta ah ama lammaanuhu waa la gelayaa. Haddii aad horey u keydisay xogtaan, qalabku si otomaatig ah ayuu ku xirmi doonaa waxaadna awoodi doontaa inaad raacdo howlahaaga qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida looga beddelo Wi-Fi Xarunta Xakamaynta oo leh iOS 13
Apple News + ma ahan macdanta dahabka ee Apple ay u xaqiijisay madbacadaha